Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tamar-dhuleedka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tamar-dhuleedka
Tomàs Bigordà | | Tamar-dhuleedka, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta la cusboonaysiin karo shaki la'aan mustaqbalka mustaqbalka dhexe iyo kan fog, baahida loo qabo in la raadiyo noocyo kale oo tamar ah si loo beddelo keydadka haraaga ah ee sii yaraanaya
Haddii aan ka hadalno tamar-dhuleedka, waxaan tixraaceynaa tamar gebi ahaanba la cusbooneysiin karo, laakiin haddii la isticmaalo toos ah ayaa sarreeya, taasi waa, awoodda dib-u-cusboonaysiinta deebaajiga ayaa ka yar kan soo saarista, ayaa sheegay in dib-u-cusboonaysiinta lumin doonto.
1 Waa maxay tamar-dhuleedka?
1.2 Taariikhda Soomaaliya
2 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
2.2 Dib udhacyada
3 Tamar-dhuleedka Spain
Waa maxay tamar-dhuleedka?
Tamarta dhulka hoosteedu waa tamar la cusboonaysiin karo taasi waxay uga faa’iideysataa kuleylka dhulka hoostiisa kuleylka iyo helitaanka biyo kulul oo nadaafadeed hab deegaan. In kasta oo ay tahay mid ka mid ah ilaha tamarta la cusboonaysiin karo yar yaqaan, saameynteeda waa kuwo cajiib ah oo lagu qanco dabeecadda. Xaqiiqdii waan wada xasuusan karnaa sawirrada volcano Etna ee Sicily oo si buuxda u qarxay, waxaan waligeen isku daynay saameynta nasashada ee biyaha kuleylka ama aad u xiiseynaya fumaroles iyo geysers, sida kuwa ku jira jardiinada Timanfaya ee Lanzarote, tusaale ahaan.
Had iyo jeer, isticmaalkeeda tooska ah ee soo saarista tamarta korantada waxay ka dhacdaa oo keliya meelaha qaarkood ee dhulka, halkaas oo ay jiraan duruufo gaar ah. aad u gaar ah, halka haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato ujeedooyinka kuleylka, fursadaha si weyn ayaa loo kordhiyay.
Codsiyada dhuleedka waxay kuxirantahay astaamaha il kasta. Kheyraadka heer kul ee heerkulka sare (ka sarreeya 100-150ºC) ayaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saarka korontada. Marka heerkulka kaydku aanu ku filnayn inuu soo saaro koronto, codsiyada ugu muhiimsan ee laga helo waa kuleylka warshadaha, adeegyada iyo qaybaha la deggan yahay.
Dalka Iswiidan wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyay ee Yurub ah ee adeegsada tamar-dhuleedka, taasoo ka dhalatay dhibaatada saliida ee 1979. Wadamada kale sida Finland, Mareykanka, Japan, Jarmalka, Holland iyo Faransiiska, tamar-dhuleedka waa tamar caan ah oo la hirgeliyay tobanaan sano.
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
Haddii aan ka hadalno faa iidooyinka iyo faa'iido darrada arrintaan isha dib loo cusboonaysiin karo, kuwa soo socda ayaa istaaga:
Gabi ahaanba waa bilaash ah oo maxalli ah, maadaama aysan ku xirneyn dhinacyada saddexaad isticmaalkeeda.
Waa la cusboonaysiin karaa dabeecadda, taas oo macnaheedu yahay marka la eego qiiqa gaaska ka imanaya saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo, iyo gaar ahaan, kaarboon laba ogsaydhka.
Waxay u roon tahay horumarinta warshadaha maxalliga ah, marka lagu daro abuurista nooc ka mid ah shaqo u qalma.
Waxqabadka thermodynamic tas-hiilaadku aad uma sarreeyo.
Maalgashi ballaaran ayaa guud ahaan looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan koronto kheyraadkan, marka lagu daro awoodda soo saaridda ma sarreyso.
Ka faa'iideysiga deebaajiga ayaa had iyo jeer ku lug leh heer aan hubin, gaar ahaan farqiga u dhexeeya kartida sahaminta iyo dhiigmiirad. Tani waa waxa kiciya kala duwanaansho weyn oo ku saabsan faa'iidada mashaariicda.
Adeegsiga kheyraadka waa in lagu fuliyaa meel u dhow halka asalka laga soo qaaday, si mararka qaar ay xarumuhu u noqdaan ka fog xarumaha magaalooyinka, aasaas ahaan marka ay jirto wax soo saar koronto.
Isbaanishka isticmaalka ilaha tamartaani waa wax aan waxba tarayn, in kastoo taasi micnaheedu ahayn inaysan awood lahayn. Marka laga hadlayo soosaarka korantada, kaliya Islands Canary Asalka ay ka soo jeedaan folkaanaha awgeed, waxay lahaan lahaayeen mudnaan ku filan oo ay ku xajistaan ​​xoogaa rakibid ah, halka adeegsiga ujeeddooyinka kuleylka horayba loogu isticmaali karo meelo badan.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa noo horseedaya xaqiiqda ah in Galicia laga yaabo inay ka mid noqoto magaalooyinka hormoodka ka ah isticmaalka tamar-dhuleedka kululaynta, qaboojiyaha iyo biyaha kulul ee dhismayaasha. Xitaa waxaa jiray hadal ku saabsan shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta bamka kuleylka
Tani waxay ka duwan tahay xaqiiqda dalalka kale, sida waa kiiska Chile, halkaas oo ah warshaddii ugu horraysay ee dhuleedka dhulka Koonfurta Ameerika , oo ay ku baxayso in ka badan 320 milyan oo doolar, taas oo tamar u abuuri doonta 165000 oo qoys.
Waa xarun koronto oo lagu rakibay 48 MW oo soo saari doonta qiyaastii 340 GWh sanadkiiba.
Soo saarida dareeraha heerkulka hooseeya ee gudaha Dhulka oo loo isticmaalo, tusaale ahaan, kululeynta aqalka dhirta lagu koriyo, waxay u maleyneysaa faa iidada wax soo saarka beeraha, Maaddaama loo oggol yahay in lagu beero nooc ka mid ah xilliyada noocyada dhirta ee aan si kale loo fulin karin.
Dhanka hoyga iyo adeegyada, ilahaan sidoo kale waa loo isticmaali karaa maxaa yeelay waxay u baahan tahay tamar laga helo enthalpy hooseeya.
Tusaalooyinka ugu wanaagsan ee adeegyadan waxay noqon karaan mashruuca qaboojinta ee dhuftoyada, qolalka farsamada iyo dhismooyinka ganacsiga ee Saldhigga Metro ee Pacífico ee magaalada Madrid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tamar-dhuleedka
Kacaankii tamarta cusub ee loo soo mariyey Xogta Weyn
Kahor 2020 Citibank kaliya wuxuu doonayaa inuu cuno tamarta dib loo cusboonaysiin karo